देखियो कुलमानको फरक रुप ! चेतावनी दिदै भने ‘एक दिन कसैले रोक्यो भने तपाईंलाई समातेर थुनिदिन्छु भिडियो - सुदूर नेपाल
देखियो कुलमानको फरक रुप ! चेतावनी दिदै भने ‘एक दिन कसैले रोक्यो भने तपाईंलाई समातेर थुनिदिन्छु भिडियो
Dinesh khaptadi May 16, 2019 0
नेपाल विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘कुल म्यान’ पनि भनिन्छ । न उनी खुलेर हाँस्छन्, न उतिसारो रिसाउँछन् । तर नुवाकोटको पैरबेसीमा बिहीबार कुलमानको फरक रुप देखियो । प्राधिकरण प्रमुख घिसिङ त्रिशूली थि ए आयोजनाको उत्पादन सुरुआत गर्न बिहीबार नुवाकोट र रसुवाको सीमा क्षेत्रमा पुगेका थिए । त्यहाँ पुग्दा त नुवाकोटको पैरबेसी भन्ने स्थानमा निर्माणाधीन त्रिशूली ‘बी’ हब स्टेशनको निर्माण स्थानीयले नियतबस रोकेको थाहा पाए ।
बिहीबार पनि प्राधिकरण प्रमुख आएको थाहा पाएपछि स्थानीय शिवप्रसाद भट्टराई र जानुका थापा नेतृत्वको समूह आइपुगे । उनीहरु सबस्टेशन अझै माथि लगेर निर्माण गर्न भन्दै चर्को स्वर निकाले । घिसिङले सब-स्टेशन निर्माण गर्दा स्थानीयको जग्गा र घरको सुरक्षाका लागि पर्खाल लगाउने काम भएको र बाँकी कामको लागि बसेर छलफल गर्न सकिने बताए । उनले सबस्टेशन निर्माणको नरोक्न आग्रह गर्दै स्थानीयको मागमा आफू गम्भीर रहेको बताए ।तर जनताको माग पनि सुनुवाई हुनुपर्‍यो भनेपछि कुलम्यान’ कुलमान रिसाए । भट्टराईको नेतृत्वकै उपभोक्ता समितिमार्फत रसुवातर्फ सुरक्षा पर्खाल लगाइएको स्मरण गराउँदै फेरि थप माग किन भने प्रश्न गरे । उनले भट्टराईलाई सोधे तपाईको जग्गामा काम गरेको छ ?भट्टराईले आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर जनताको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । कुलमानले भने तपाईको माग भन्नुस् न जनताको होइन । जनताको माग समाधान गर्छौं हामी ।भट्टराई आफैं रसुवातर्फको पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् । उनले जनताको नाम लिँदै नाजायज मागहरु राख्ने गरेको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । बिहीबार पनि उनले जनताको माग भन्दै थप माग तेस्र्याएका थिए ।mixkhabar.com bata
Previous Post: कृष्ण वलिले खुट्टा हाले, रुपा सँसारकै खुशी -भिडियो
Next Post: वल्ड च्याम्पियनसिपको लागि कैलाश नाउ बेल्जियम प्रस्थान